नवप्रतिभाशाली खेलाडीलाई पुरस्कृत - नेपालबहस
नवप्रतिभाशाली खेलाडीलाई पुरस्कृत
| १२:४६:४६ मा प्रकाशित
२ चैत,सप्तरी । राजविराजमा आज भएको देवसुन्दर स्मृति प्रथम राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगितामा सप्तरीका १६ वर्षीया सरिता यादव र कञ्चनपुरका १९ वर्षीय अशोकसिंह भण्डारीले नवप्रतिभाशाली खेलाडीका रुपमा पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगितामा महिलातर्फ यादव र पुरुषतर्फ भण्डारीले आफ्नो तौल समूहमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुका साथै नव प्रतिभाशाली खेलाडी घोषित भएका हुन् । उनीहरुले स्वर्ण पदक वापत मेडल र प्रमाणपत्र तथा नव प्रतिभाशाली खेलाडी वापत कप र पाँच हजार नगद प्राप्त गरेका छन् ।
नव प्रतिभाशाली खेलाडी सरिताले प्रतियोगिताको महिला ५९ केजी तौल समूहमा जुनियरतर्फ स्न्याचमा ५० किलो र क्लिन एण्ड जर्कमा ६० किलो तौल उचालेर कूलमा ११० किलो भार बहन गरिन् । सो समूहमा स्न्याचतर्फ ४० र क्लिन एण्ड जर्कतर्फ ५० गरी कूलमा ९० किलो भार बहन गरी द्वितीय हुनुभएकी बर्दियाकी ललिता हेमरान युवातर्फ प्रथम भइन् ।
नवप्रतिभाशाली पुरुष खेलाडी कञ्चनपुरका भण्डारीले पुरुषको ६७ किलो तौल समूहमा स्न्याचतर्फ ७६ किलो र क्लिन एण्ड जर्कमा १०२ गरी कूलमा १७८ किलो भार बहन गरे । सो समूहमा बाँकेका तुषार बुढामगरले स्न्याचमा ६७ र क्लिन एण्ड जर्कमा ९० किलो गरी कूलमा १५७ किलो भार बहन गरेर रजत पदक प्राप्त गरे । पर्साका नीरजकुमार गुप्ताले स्न्याचमा ७० र क्लिन एण्ड जर्कमा ८० गरी कूलमा १५० किलो उचालेर तृतीय भए । राजविराजमा भएको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विभागीय तीनै टोलीका साथ २० जिल्लाका ४७ महिला र ७३ पुरुष गरी १२० खेलाडी सहभागी छन् ।
यसअघि गएराति नेपाल पुलिस क्लबकी तारादेवी पुन र कञ्चनपुरका सुवास उपाध्याय राजविराजमा भएको देवसुन्दर यादव प्रथम स्मृति राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगिताको स्ट्रङगेस्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । तारा महिला र सुवास पुरुषतर्फ सो विधामा चुनिएका हुन् । दुवैले कपसहित पाँच हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक विजेता पुनले स्न्याचमा ६७ं किलो र क्लिन एण्ड जर्कमा ९० किलो तौल उचालेका छन् । सिनियर महिलातर्फ ८७ किलोग्राम तौल समूहमा कूल १५७ किलो तौल उचालेर प्रथम हुनुभएकी पुन प्रतियोगिताको स्ट्रोड्ग वुमेनसमेत घोषित भएका हुन् । कञ्चनपुरका सुवास उपाध्यायले स्न्याचमा ११४ं किलो र क्लिन एण्ड जर्कमा १३५ किलो गरी कूल २४९ किलो तौल उचाले । पुरुषको सिनियरतर्फ १०९ किलो तौल समूहमा स्वर्ण पदक जितेका सुवास पुरुषतर्फ स्ट्रोड्ग म्यान घोषित भए ।
सो तौल समूहमा बारामा आसिफ हुसेनले स्न्याचमा १०७ र क्लीन एण्ड जर्कमा १२० गरी कूल २२७ किलो तौल उचालेर रजत पदक प्राप्त गरे । बर्दियाका रोशन विसीले स्न्याचमा ७० र क्लीन एण्ड जर्कमा १०५ गरी कूल १७५ किलो तौल उचालेर कास्य पदक प्राप्त गरे । पुरुषको १०२ किलो तौलसमूहमा नेपाल प्रहरीका सागर भण्डारीले कूल २२२ किलो उचालेर प्रथम भए । सशस्त्र प्रहरीका रणबहादुर नगरकोटीले कूल २१६ किलो उचालेर द्वितीय तथा नेपाली सेनाका विकास खड्काले कूल २०५ किलो उचालेर तृतीय भए । पुरुषको सिनियरतर्फ १०९ किलो भन्दामाथिको समूहमा नेपाल प्रहरीकै राजेश महर्जनले स्वर्ण प्राप्त गरे । उनले स्न्याचमा १०७ र क्लिन एण्ड जर्कमा ११५ गरी कूल २२२ किलो तौल उचाले । राजविराजमा भएको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विभागीय तीनै टोलीका साथ २० जिल्लाका ४७ महिलासहित १२० खेलाडी सहभागी छन् ।
कार दुर्घटनामा टाइगर वुड्सकाे गम्भीर घाइते २ महिना पहिले
सन्दीपको दुई विकेटको मद्दतमा होबार्ट विजयी ३ महिना पहिले
पाकिस्तान सुपर लिगको छनोटमा नेपाली खेलाडी असफल ३ महिना पहिले
दिनदिनै महामारी फैलिदैछ तर सावधानी छैन, जोखिम उच्च ! ४ मिनेट पहिले
गृहमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति पाएका बादलले लिए शपथ १३ मिनेट पहिले
संक्रमण बढेसँगै यतीकाे स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई १७ मिनेट पहिले
नेप्से आज दोहोरो अङ्कले ओरालो २२ मिनेट पहिले
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज : नेदरल्याण्डस्द्वारा मलेशिया पराजित २७ मिनेट पहिले
अमेरिकामा गोली चल्दा दुई जना घाइते ७ घण्टा पहिले
डिम्याट खोल्नेको संख्या ३४ लाख नजिक ७ दिन पहिले
रारामा पर्यटकको चहलपहल बढ्न थाल्यो २ हप्ता पहिले
राजनीति दल एक हुनुपर्ने एनआरएन अगुवाकाे टिप्पणी ११ महिना पहिले
अब हट्नेछ सडकमा छाडाछोडिएका भुस्याहा कुकुरको समस्या ३ महिना पहिले
पूर्वी चीनमा आगलागी, पाँचको मृत्यु तीन घाइते १ वर्ष पहिले
त्रिविको जागिरमा नेता र त्रिवि कर्मचारीका आफन्तहरुको नाम ! २ वर्ष पहिले